पानी पर्दा, ग्रीनहाउस आपूर्तिकर्ता र निर्माताका लागि पानी प्याड कूलिing प्रणाली - चीन कारखाना - जिआन्डा
घर > उत्पादनहरू > Greenhosue प्रणाली > चिसो बनाउने प्रणाली > पानी पर्दा, ग्रीनहाउसका लागि पानी प्याड कूलि System प्रणाली
पानी पर्दा, ग्रीनहाउसका लागि पानी प्याड कूलि System प्रणाली
पानी पर्दा, ग्रीनहाउसका लागि पानी प्याड कूलि System प्रणाली मुख्यत: कुखुरा फार्महरू, सुँगुर फार्महरू, हरितगृहहरू, कारखानाहरू, इत्यादि। सँगै गाँसिएको छ। यो अनुपम डिजाइनले उच्च वाष्पीकरण दक्षताको साथ एक कूलि pad प्याड उत्पादन गर्दछ, जबकि अझै पनि धेरै कम प्रेशर ड्रपमा सञ्चालन गर्दछ। पानी नाली प्रकारको ग्रीनहाउस वाष्पीकरण कूलि pad प्याडको नालीदार सतहमा बग्दछ। पानीको केही अंश प्याडमा पार गर्ने तातो र सुख्खा हावाले वाष्पीकरण गर्दछ। बाँकी पानी प्याड धुनेमा मद्दत गर्दछ, र फेरि गटर प्रणाली मार्फत पम्प स्टेसनमा निकालिन्छ।
पानी पर्दा, ग्रीनहाउसका लागि पानी प्याड कूलि system प्रणाली मुख्य रूपमा भेन्टिलेसन र कुखुराको लागि प्रयोग गरिन्छ कुखुरा फार्म, सुँगुर फार्महरू, हरितगृहहरू, कारखानाहरू, आदि।
गटर प्रकार ग्रीन हाउस वाष्पीकरण कूलि pad प्याडमा विशेष बाँझी र नालीदार सेल्युलोज कागज पानाहरू हुन्छन्, जो विभिन्न बाँसुरी कोणहरू हुन्, जुन सँगै गाँसेको छ। यो अनौंठो डिजाइनले उच्च वाष्पीकरण दक्षताको साथ एक कूलि pad प्याड उत्पादन गर्दछ, जबकि अझै पनि एक धेरै कम दबाव ड्रपमा कार्य गर्दछ।
पानी नाली प्रकार ग्रीनहाउस वाष्पीकरण कोलि cool प्याड को नालीदार सतह तल बग्छ। पानीको केही अंश प्याडमा पार गर्ने तातो र सुख्खा हावाले वाष्पीकरण गर्दछ। बाँकी पानी प्याड धुनेमा मद्दत गर्दछ, र फेरि गटर प्रणाली मार्फत पम्प स्टेसनमा निकालिन्छ।
वाष्पीकरणको लागि आवाश्यक पर्ने तातो हावाबाट लिइएको हो। प्याड छोड्ने हावा वाष्पीकरण प्रक्रियाको लागि कुनै बाह्य उर्जा आपूर्ति बिना नै एकैसाथ चिसो र आर्द्रता दिइन्छ। यो प्रकृतिको आफ्नै चिसो प्रक्रिया हो।
१) यो महकोट संरचनाको साथ विशेष कागजबाट बनाइएको हो। त्यहाँ दुई प्रकारका वेभ हाइटहरू हुन्: mm मीमी र mm मीमी, र कोरुगेसन ° 45 ° × °× w अन्तर्बिहिन हो। उच्च-पानी अवशोषण, उच्च पानी प्रूफ, फफूरो-प्रतिरोध र लामो सेवा जीवनको लागि नयाँ-पुस्ताको पोलीमरहरू र स्पेस क्रस लिंक टेक्नोलोजी अपनाउनुहोस्।
२) वाष्पीकरण क्षेत्र सतह भन्दा ठुलो छ, %०% माथि चिसो क्षमतासहित।
)) यस उत्पादनले कुनै सतह सक्रिय एजेन्टहरू, पानी स्वाभाविक रूपले, उच्च गतिमा बिभिन्न, प्रभावकारिताको साथ समावेश गर्दछ। पानीको एक थोपा completely- dif सेकेन्ड भित्र पूर्ण रूपले विसरित हुन्छ, जुन राष्ट्रिय विशिष्टता मापदण्ड भन्दा बढी छ। प्राकृतिक पानी अवशोषण को उचाई 60 ~ 70mm / 5min छ; २००mm / hou, जुन पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक मापदण्डहरूमा भर पर्छ।
)) यसले फिनोल वा त्यस्ता रासायनिक पदार्थहरू समावेश गर्दैन जुन छालाको एलर्जीको लागि सजिलो हुन्छ। यो गैर विषाक्त, हानिरहित, हरियो, सुरक्षित, ऊर्जा बचत, वातावरणीय संरक्षण, आर्थिक र लागू हो।
ग्रीनहाउस मुख्य प्यारामिटरको लागि कूलि fan फ्यान प्रणाली:
१00०० / १00०० / २००० / अनुकूलित
300/600 / अनुकूलित
१०० / १ 150० / २०० / अनुकूलित
° 45 ° / ° 45 °
निम्नको रूपमा ग्रीनहाउस अनुप्रयोगको लागि कुल प्रशंसक प्रणाली:
१) भेन्टिलेटिंग र कूलि;
औद्योगिक क्षेत्र: कपडा, कपडा बनाउने, गिलास, रबर, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स, प्रशोधन, धुलाई र उच्च तापमान संग कार्यशाला।
सिविल फिल्डहरू: नेट बारहरू, सुपरमार्केटहरू, मेस हल, वेटिंग कोठा र मनोरन्जन गर्ने ठाउँहरू र वातानुकूलित अन्य अवसरहरू।
कृषि क्षेत्रहरू: ठूला फार्महरू, हरितगृह र पशुधन फार्म, आदि।
२) आर्द्रता समायोजन; कपडा कारखाना, व्यावसायिक र नागरिक भवनको आर्द्रता समायोजित गर्नुहोस्।
)) औद्योगिक उपकरण; चिसो तातो एक्सचेन्जर र पानी रोक्ने तखतका रूपमा, सबै प्रकारका उपकरण निर्माणमा लागु हुन्छ।
पानी पर्दा, ग्रीनहाउसका लागि पानी प्याड कूलि system प्रणाली, नालीदार कागजमा उच्च तीव्रता संरचना, जंग प्रतिरोधी, लामो सेवा जीवन छ।
फाइन पेरकोलाटिंग र पानी अवशोषित गर्न पानी टिप्न भित्ताको भित्ता सुनिश्चित गर्न।
विशिष्ट त्रिविम संरचना
बाहिरी फ्रेम एल्युमिनियम मिश्र र गल्भेनाइज्ड बोर्डको विकल्प हुन सक्छ
पानी पर्दा, pad दिनमा कन्टेनरमा हरितगृह वितरणको लागि पानी प्याड कूलि system प्रणाली।
ए-प्रकार रोपण गटर, ग्रू, स्ट्रबेरीका लागि सब्सट्रेट हाइड्रोपोनिक्स मार्फत, जिन्डा ग्रीनहाउस कम्पनीबाट सलाद हाम्रो कारखानामा भ्रमण र कुनै पनि छानबिन गर्न स्वागत छ।
There. कुनै निर्देशन वा म्यानुअल गाइड स्थापना छ?
हट ट्याग: पानी पर्दा, ग्रीनहाउस, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, थोक, खरीद, ब्रांड, गुणवत्ता, कम मूल्य, छूट, अनुकूलित, सस्तो, चीन मा निर्मित, मूल्य सूची, उद्धरण, सीई, १ 15 वर्ष वारंटी
ग्रीनहाउसका लागि शीतलक फ्यान प्रणाली